Balaan abiddaa Gaaraajii Awtoobisii Anbassaa Jamootti argamu irratti kaleessa halkan sa’a 9:15 irratti qaqqabe miidhaa…	Read More
Goddinaalee Oromiyaa 20 fi magaaloota 10 keessatti konfirensiin xumuura haaromsaa har’a milkaa’inaan xumuramuusaa Biiroon Dhimmoota…	Read More
Magaalaa Finfinneetti baasii Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50n gamoon leenjii fi sakata’a konkolaataa ijaaruuf…	Read More
Qotiisi holqa lama Piroojaktii Baaburaa Maqalee- Waldiyaa- Haraa Gabayaa tokkoon tokkoon isaanii kiiloo meetira 2…	Read More
Leenjitoonni haaromsaa to’annaa koomaand poostii jala turan gara dhufanitti deebi’aa jiru. Xoollaayii namoonni 4,035 gara…	Read More
Muummichi ministiraa obbo Haaylamaariyaam Dassaalany warshaalee sukkaaraa Oomoo Kurraaz 1 fi 2 daawwatan. Obbo Haaylamaariyaam…	Read More
Godina Shawaa Lixaatti Waajjirri Barnoota godinichaa qaamolee bu’aa gaarii galmeessisan, manneen barnootaa godinichaa keessatti argamaniif…	Read More
Ijaaramaa kan jiranii fi warshaalee sukkaaraa duraaniif korojoo akka dhiheessuuf yaadamee ijaaramaa kan ture Warshaan…	Read More
Rakkoolee bulchiinsi gaariin dhibuu fi kiraa sassaabdummaa magaalota Naannoo Oromiyaatti uummaticha dheekkamsiisan dhabamsiisuuf mootummaan kutannoodhaan…	Read More
Roobni tibbanaa midhaan ga’e akka hin balleessine ofeeggannoon taasifamuu qaba jedhe Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa. Naannoleen…	Read More
Haaromsa gadi fageenya yeroo ammaa gaggeeffamaa jiruun gaggeessitoota barumsaan, dandeetti fi muuxannoo isaanitiin iddoo jijjiirama…	Read More
Sirni Gadaa’ UNESCO’ irratti galmaa’uusaan garasitti qajeelfama uummattoota addunyaa akka ta’uuf caalaatti hojjatamuu akka qabu…	Read More
Ayyaanni saboota, sablammootaa fi ummattootaa Ityoophiyaa wagga waggaadhan Sadaaasa 29 ayyaaneffamuun guddina magaalotaaf boqonnaa haaraa…	Read More
Godina Iluu Abbaa Booratti gaggeessitoota sadarkaa jalqabaa aanaalee 13 fi bulchiinsa magaalaa 1 irraa walitti…	Read More
Piroojaktiin misooma jallisii xixiqqoo boqonnaa lammataa ifoomsameera. Piroojaktichi abbootii warraa kuma 108 fayyadamoo akka taasisu…	Read More
Gaaffii fi komii ummataa hiikuuf mootummaan ummata waliin qindoomee ni hojjeta jedhan obbo Lammaa Magarsaa.…	Read More
Hariiroo mootummaa federaalaa fi naannolee jidduu jiru cimsuuf seerri qophaa’aa jiraachuu Manni Maree Federeeshinii ibse.…	Read More
Gaazii uumamaa fayyadamuun waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 jiddu galli oomishu Doolaara biiliyoona 2.5n…	Read More
Marii fi gamaaggamni haaromsa gadi fageenyaa hoggansa sadarkaa giddu galeessaa har’as itti fufee oolera. Waltajjiin…	Read More
Finfinnee, Onkololeessa 14,2009(BDHKMNO) – Rakkoolee ummanni kaasus karoora yeroo dheeraa fi gabaabaan ummata waliin taanee ni…	Read More
Fayyadamtoonni sagantaa wabii nyaataa magaalota 11 adda baafamaa jiru. Hojiin adda baasuu kunis Adaamaa, Hawaasaa,…	Read More
Finfinnee, Onkololeessa 13, 2009 (FBC) Walga’ii ariifachiisaa lammaaffaa waggaa lammaaffaa bara hojii shanaffaa Caffeen Oromiyaa…	Read More
Ijaarsi Hidha madda Annisaa Gibee 3 guutumaan guutuutti xumuramee Sanbat- duraa dhufu eebbifama. Hoji-raawwachiinsaan Olaanaa…	Read More
Horsiisee-bultoota hojii isaanii karaa hammayaan hojjechuun kan milkaa’anii fi horsiisee bultoota biroof fakkeenya ta’uu danda’an…	Read More
Godina Buunoo Baddallee aanaa Baddallee fi Cooraatti buna sanyii filatamaa qorannoon argametti fayyadamuun bu’a qabeeyyii…	Read More
22-02-2017Warshaan ‘Maarbilii’ naannoo Harariitti baasii Birrii miliyoona 60 ijaarame hojii jalqabeWarshaan ‘Maarbilii’ naannoo Harariitti baasii Birrii miliyoona 60 ijaarame kaleessa eebbifamee hojii jalqabeera.
Warshicha eebbisanii kan banan Af-yaa’ii Mana-maree naannichaa Obbo Yaasin Huseen akka jedhanitti industirii oomishaa babal’isuuf mootummaan naannichaa xiyyeeffannoo kennee hojjataa jira.
Keessumaa qabeenya uumamaa...Read more	13-02-2017Balaan abiddaa Gaaraajii Awtoobisii Anbassaa Jamootti argamu irratti qaqqabe miidhaa Birrii miliyoona 46 qaqqabsiiseeraBalaan abiddaa Gaaraajii Awtoobisii Anbassaa Jamootti argamu irratti kaleessa halkan sa’a 9:15 irratti qaqqabe miidhaa Birrii miliyoona 46 qaqqabsiiseera.
Balaan abiddaa kun awtoobisoota suphaadhaaf achi keessa turan 11 guutumaan guutuutti barbadeesseera.
Abbaan-taayitaa Ittisaa fi Too’annaa Ibiddaa fi...Read more	13-02-2017Konfirensiin uummataa naannoo Oromiyaa milkaa’inaan xumurameeraGoddinaalee Oromiyaa 20 fi magaaloota 10 keessatti konfirensiin xumuura haaromsaa har’a milkaa’inaan xumuramuusaa Biiroon Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa beeksise.
Hogganaan biirichaa, Obbo Addisuu Araggaa konfirensii xumuura haaromsaa ilaalchisuun ibsa addatti tuuta gaazexessitootaaf keennaniin konifireensiin ummataa...Read more	13-02-2017Magaalattiitti Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50n wiirtuun leenjii fi sakatta’a konkolaataa ijaaramuufiMagaalaa Finfinneetti baasii Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50n gamoon leenjii fi sakata’a konkolaataa ijaaruuf jedha.
Gamoon lafa heektaara 9.2 irratti Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo keessatti ijaaramu kun hojiin diizaayinii’ isaa xumuramuusaa Abbaan-taayitaa Eyyamaa fi To’annaa...Read more	23-01-2017Koonfiransiin Waldaa Dargaggoota Oromiyaa damee Finfinnee gaggeeffameKoonfiransiin Waldaa Dargaggoota Oromiyaa damee Finfinnee har’a magaalaa Finifnnee galma Aadaa Oromotti gaggeeffame xumurame.
Dargaggoonni koonfiransicha irratti hirmaatan, kutaalee bulchiinsa magaalaa kurnanirraayyuu kan walitti babba’ani.
Dargaggoonni kanneenis hojiin dargaggootaaf uumuuf karoorfamee maal irra akka jiru, manneen barnootaa...Read more	23-01-2017Qotiisi holqa lama Piroojaktii Baaburaa Maqalee- Waldiyaa- Haraa Gabayaa kiiloo meetira 2 dheeratanii xumurameQotiisi holqa lama Piroojaktii Baaburaa Maqalee- Waldiyaa- Haraa Gabayaa tokkoon tokkoon isaanii kiiloo meetira 2 dheeratanii xumurame.
Holqawwan ijaarsisaanii xumurame kunniin holqawwan Kukniiti.
Holqawwan piroojaktii baaburaa kanarra jiran keessaa dheerina isaan adda duree kan ta’e holqi Maayisalfiis...Read more	23-01-2017Naannoo Oromiyaatti horsiisee bultoota goota misoomaa 130 ta’aniif beekamtiin keennameefHorsiisee-bultoota hojii isaanii karaa hammayaan hojjechuun kan milkaa’anii fi horsiisee bultoota biroof fakkeenya ta’uu danda’an 130 ta’anii Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin beekamtiin keennameef .
Horsiisee bultoota goota misoomaa guyyaa kaleessaa beekamtii argatan kunniin Sadarkaa I/A Pireezidaantiitti Hogganaa...Read more	29-12-2016Qonnaan bultoonni Baddallee fi Cooraa buna qorannoon argamanitti fayyadamuun bu'a qabeeyyii ta'uu himanGodina Buunoo Baddallee aanaa Baddallee fi Cooraatti buna sanyii filatamaa qorannoon argametti fayyadamuun bu’a qabeeyyii ta’aa akka jiran qonnaan bultoonni himan.
Aanaalee kanneenitti lafti heektaarri 7,400 ol buna sanyii filatamaan misoomaa jira.
Waajjiraalee qonna aanaaleerraa sanyii filatamaa...Read more	29-12-2016Ijaarsi Riifaraal Hospitaala Yuunvarsiitii Wallaggaa xumurameRiifaraal Hospitaalli Yuunvarsiitii Wallaggaa Birrii miiliyoona 114n ijaarrame tajaajilaaf qophaa’aa jira.
Yuunvarsiitichatti daayreektarri bulchiinsaa fi misooma koolleejjii saayinsii fayyaa Dooktar Dassaalany Wiirtuu akka jedhanitti ijaarsi hoospitaalichaa bara 2000 eegalee sababoota addaddaan harkifannaan osoo hin xumuramin hafeera.
Yeroo...Read more	23-12-2016Damee ijaarsaa guddisuuf karoorri Birrii biiliyoona 122 olii mariif dhiyaateJi’oottan 4 darban qofatti namoonni hojii ijaarsa gamoorratti bobba’an 21, hojiirra osoo jiranuu balaa irra ga’een du’aaf saaxilamaniiru.
Damicharratti rakkoolee muul’atanirratti mariin biyyoolessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera.
Waltajjicharratti labsiin ijaarsa gamoo bara 2002 ba’e seeran hojiirra ooluu dhabuu...Read more	22-12-2016To’annaa koomaand poostii jala kan turan deebi’aa jiruLeenjitoonni haaromsaa to’annaa koomaand poostii jala turan gara dhufanitti deebi’aa jiru.
Xoollaayii namoonni 4,035 gara dhufanitti akka deebi’anis himameera.
Xoollaayitti kan argaman muummichi ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany ergaa dabarsaniin, leenjitoonni haaromsaa gara jireenya isaanii idileetti akka deebi’an...Read more	20-12-2016Muummichi ministiraa warshaalee sukkaaraa Oomoo Kurraaz 1 fi 2 daawwatanMuummichi ministiraa obbo Haaylamaariyaam Dassaalany warshaalee sukkaaraa Oomoo Kurraaz 1 fi 2 daawwatan.
Obbo Haaylamaariyaam toora warshaaleen sukkaaraa lameen itti ijaarramaa jiranitti hojiilee qonnaa gaggeeffamaa jiran daawwataniiru.
Warshaaleen sukkaaraa lameenis yeroo dhiyootti xumuramanii hojii akka jalqaban obbo...Read more	20-12-2016Shawaa Lixaatti qaamoleen manneen barnootaatti bu’aa galmeessisan badhaafamanGodina Shawaa Lixaatti Waajjirri Barnoota godinichaa qaamolee bu’aa gaarii galmeessisan, manneen barnootaa godinichaa keessatti argamaniif badhaasa kenne.
Sagantaa qophaa’e kana irratti barattoota, barsiisota, ogeeyyii barnootaa fi dhaabbilee barnootaa bu’aa ol’aanaa galmeessisaniif badhaasni maallaqaa fi waancaa; akkasumas...Read more	20-12-2016Lammiilen koomaand poostiin qabaman leenjii dhimmoota 8rratti fudhataniiruRakkoo nageenyaa uumamee tureen lammiilen qabamanii fi jiddu galoota 5tti haaromsa fudhachaa kan turan 9,800 booru gadi lakkifamu.
Lammiilen kanneen haaromsaan leenjii argatan, hawaasatti yammuu makaman kaanif qooduuf qophaa’uu isaanii Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.
Leenjiin isaan fudhachaa...Read more	16-12-2016Warshaalee sukkaaraaf korojoo kan oomishu Warshaan korojoo Jiinkaa yaalii jalqabeeraIjaaramaa kan jiranii fi warshaalee sukkaaraa duraaniif korojoo akka dhiheessuuf yaadamee ijaaramaa kan ture Warshaan Korojoo Jiinkaa yaaliirra jira.
Ijaarsisaa Korporeeshinii Sibilaa fi Injinariingiin kan hojjatame warshichi Birriin miliyoonni 60n itti ba’eera.
Warshicha Magaalaa Jinkaa keessatti ijaaruun...Read more	14-12-2016Fayyadamtoonni sagantaa wabii nyaataa magaalota 11 adda baafamaa jiruFayyadamtoonni sagantaa wabii nyaataa magaalota 11 adda baafamaa jiru.
Hojiin adda baasuu kunis Adaamaa, Hawaasaa, Dirree Dawaa, Maqalee fi Daseetti gaggeeffamaa kan jiru yammuu ta’u, magaalota kaanittis torbeewwan itti aananitti kan gaggeeffamu akka ta’e Eejansiin Carraa...Read more	14-12-2016Ijaarsi Hidha Madda Annisaa Gibee 3 xumurameIjaarsi Hidha madda Annisaa Gibee 3 guutumaan guutuutti xumuramee Sanbat- duraa dhufu eebbifama.
Hoji-raawwachiinsaan Olaanaa Humna Elektirikaa Itiyoophiyaa Injinar Azeeb Asnaaqaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti ijaarsisaa bara 1999tti kan jalqabe hidhichi Yuuroon biliyoonni 1.5 itti-ba’eera.
Baasii...Read more	12-12-2016Naannichatti rakkoolee bulchiinsa gaarii uummaticha dheekkamsiisan dhabamsiisuuf mootummaan kutannoon hojjataa akka jiru ibsameRakkoolee bulchiinsi gaariin dhibuu fi kiraa sassaabdummaa magaalota Naannoo Oromiyaatti uummaticha dheekkamsiisan dhabamsiisuuf mootummaan kutannoodhaan hojjataa akka jiru Pireezdaantiin Naannichaa Obbo Lammaa Magarsaa ibsan.
Naannichatti hoggantoonni magaalaa haaraa gara itti-gaafatamummaatti dhufan haala itti tajaajila malu hawaasaa...Read more	09-12-2016Sulultaaf hoggantoonni haaran muudamanHaaromsa gadi fageenya yeroo ammaa gaggeeffamaa jiruun gaggeessitoota barumsaan, dandeetti fi muuxannoo isaanitiin iddoo jijjiirama fiduu danda'anitti ramaduun mootummaan xiyyeeffannaa itti kennee hojechaa jira.
Haaluma kanaan preezdaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kantibaa fi kaabinoota...Read more	06-12-2016Roobni tibbanaa midhaan ga’e akka hin balleessine ofeeggannoon taasifamuu qabaRoobni tibbanaa midhaan ga’e akka hin balleessine ofeeggannoon taasifamuu qaba jedhe Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa.
Naannoleen hanqina roobaa qaban ammoo jiidhina argatanitti akka fayyadaman dhaamera.
Raaga eejansichaatin guyyoottan 5 dhufan naannoleen biyyattii hedduun qilleensa gogaa qabaatu.
Qonnaan bultoonnis haala...Read more	01-12-2016Obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa Hogganaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’uun muudaman.Obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa Hogganaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’uun muudaman.
Obboo Addisuun iddoowwan garaa garatti muudamuun imaanaa itti keennamee gahuumsaan kan bahaa turaniifi hanga Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa ta’anii muudamanitti, Deetaa ministeeraa...Read more	01-12-2016Sirni Gadaa ‘UNESCO’ irratti galmaa’uusaan garasitti qajeelfama uummattoota addunyaa akka ta’uuf caalaatti hojjatamuu qaba: Obbo…Sirni Gadaa’ UNESCO’ irratti galmaa’uusaan garasitti qajeelfama uummattoota addunyaa akka ta’uuf caalaatti hojjatamuu akka qabu Pireezdaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa himan.
Pireezdaantichi Sirni Gadaa hambaa addunyaa ta’ee erga galmaa’ee booda turtii Faanaa Biroodkaastiing Korporeet...Read more	30-11-2016Ayyaanni sabaa fi sablammootaa guddina magaalotaaf boqonnaa haaraa banaa jiraAyyaanni saboota, sablammootaa fi ummattootaa Ityoophiyaa wagga waggaadhan Sadaaasa 29 ayyaaneffamuun guddina magaalotaaf boqonnaa haaraa banaa akka jiru Ministeerrii Magaalaa fi Misooma Manneenii beeksisee.
Ayyaanichi wagga waggaan magaalota gara garaatti ayyaaneffamuun isaas hawaasni magaalaa qopheessuu fayyadamaa...Read more	28-11-2016Iluu Abbaa Booraa haaromsa gaggeessitoota sadarkaa jalqabaa xumureGodina Iluu Abbaa Booratti gaggeessitoota sadarkaa jalqabaa aanaalee 13 fi bulchiinsa magaalaa 1 irraa walitti dhufaniin haaromsi gadi fageenyaa guyyoota saddetiif gaggeeffamaa tare xumurame.
Obbo Ashannaafii Moosisaa bulchaan godina Iluu Abbaa Booraa akka jedhanitti gaggeessaa imaanaa...Read more	Culture
Human resource officer (1) Network Administrator (2) Project Manager (1)
Information technology(2) Office Equipments (3) Clothing and uniform (4)
FInd city in oromia
7721	Hits	Oromia Regional Governmen communication office